Soo iibso budada Diosmetin (520-34-3) hplc≥98% - Wisdompowder
Budada Diosmetin waa flavone ka tirsan fasalka 'O-methylated flavonoids'. Xaruntu waa aglycone of diosmin (diosmetin 7-o-rutinoside), oo si dabiici ah ugu soo bandhigaysa miraha liinta sida liin dhanaanta.
Diosmetin wuxuu soo bandhigaa kansarka ka hortagga, ka-hortagga bararka, antinociceptive, iyo anti-oxidant guryaha. Waddooyinka cilmi-baarista, saynisyahannadu waxay u aqoonsadaan 3 ', 5,7-trihydroxy-4'-methoxyflavone. Diosmetin iyo chrysoeriol labaduba waa methylated metabolites of luteolin. Diosmetin dareeraha biyaha waa 0.075 g/L.
Budada Diosmetin (520-34-3) fiidiyow
Macluumaadka Salka Diosmetin
Magaca kiimikada benzopyran-4-kow
Isku mid ahaanshaha Cyanidenon-4′-methyl ether 1479, Luteolin-4′-methyl ether
Formula kelli C16H12O6
Miisaanka kelli 300.26 g / mol
Dhibicda Biyaha 257-259 ° C
Muhiimadda InChI MBNGWHIJMBWFHU-UHFFFAOYSA-N
Imaanshaha budo khafiif ah illaa huruud ah
Nolosha badh 22.9 saacadaha 40.1
milmi Si tartiib ah ugu milma biyaha (<1 mg / ml). Ku milma acetonitrile, DMSO (60 mg / ml), iyo ethanol (17 mg / ml).
Codsiga kaabeyaasha cuntada, waxyaabaha cuntada lagu daro
Taariikhda Diosmetin Powder Taariikhda
Bilaabidda baaritaanka cilmi-baarista budada Diosmetin waxay dib u soo noqotey illaa 1920-meeyadii, markii meeshiisa laga soo saaray, aagga laga soo saaray, laga soo saaray qotodheer. Afar iyo toban sano ka dib, saynisyahano cilmi baaris ayaa ku tilmaamay in flavone glycoside inuu yahay wakiilka daweynta ee daaweynta cudurada vascular. Waa inaad ogaataa in diosmin ay hordhac u tahay flavanoid-kan. Si kastaba ha noqotee, waad ku kala saari kartaa dhismahooda adoo adeegsanaya falanqaynta diosmetin NMR falanqaynta.
Bilowgii qarnigii 21aad, xiisaha sayniska iyo qiimaha dawooyinka budada diosmetin ayaa ugu sarreeyay. Saynisyahannada cilmi-baarista ayaa hadda ka fiirsanaya xarunta in ay u noqoto daaweyn kale oo loogu talagalay kansarka qaarkood.
Waqti dheeri, diosmetin waxaa loo isticmaalaa sidii cuntada lagu daro iyo kaabeyaasha cuntada.
Sidee ayuu Diosmetin Powder u shaqeeyaa?
Burooyinka kansarka ayaa ka masuula culeyska xad dhaafka enzymes-ka CYP1.
Budada Diosmetin waxay isu beddelaysaa luteolin oo ku jirta unugyada kansarka ee dadka. Tallaabadani waxay dhacdaa ka dib qiyaastii 12 iyo 30 saacadood ka dib markaad maamusho daawada. Sida laga soo xigtay saynisyahano cilmi-baarayaal ah, luteolin waxay leeyihiin astaamo cytotoxic awood leh.
Diosmetin wuxuu xannibayaa wejiga G2-M, taasoo horseedaysa kor u qaadista p53, p51, iyo p-ERK (phospho-extracellular signal-reguised kinase). Borotiinadani waxay muhiim u yihiin buro ama xakamaynta kansarka.
Diosmetin Powder Faa'iidooyinka
Mid ka mid ah isticmaalka loo yaqaan 'diosmetin' ayaa ah maaraynta kansarka kala duwan sida xiidanka, qanjirka 'prostate', naasaha, hepatocellular, kaadiheysta, iyo kaadi mareenka. Isku darka xallinta daaweyntan ayaa ah inay leedahay saameyn aan yareyn marka loo eego kiimikada. Waxa taas ka sii daran, waa mid aad u jaban oo aan wax saamayn ah ku yeelan doonin unugyada caadiga ah.
Diosmetin wuxuu soo bandhigayaa saameynta anti-carcinogenic asaga oo keenaya apoptosis iyo dib u dhigida dib-u-dhigga unugyada kansarka. Unugyada hepatocellular carcinoma, HepG2, diosmetin waxay kicisaa qabashada G2-M iyo muujinta borotiinka P53.
Loogu talagalay cudurka 'myeloid leukemia' ee daran, daaweynta daaweyn disometin ah oo daahday koritaanka buro sababtuna tahay kororka cytokine TNFα iyo caspases 8 iyo 3/7, kuwaas oo ah kuwa iskala bakhtiinta unugyada kansarka.
Daraasadihii ugu dambeeyay waxay xaqiijiyeen suuragalka diosmetin ee xoojinta lafaha. Sida apigenin, flavonoid-gu wuxuu ka hortagaa osteoporosis. Waxay ku shaqaysaa fududeynta osteoblast kala sooca MG-63 iyo unugyada hFOB. Ka sokow, diosmetin wuxuu sababaa koritaanka unugyada dhuuxa lafta.
Diosmetin wuxuu kordhiyaa dheecaanka osteocalcin, macdanta, soosaarka osteopontin, iyo isku-darka nooca I collagen. Arimahani waxay door muhiim ah ka ciyaaraan dheef-shiidka kiimikaad.
Diosmetin wuxuu ka ilaaliyaa unugyada jirka ka soo horjeedka walaaca 'oxidative stress' isagoo xakameynaya ROS (noocyada ogsijiinta ee firfircoon). Sida naringenin, saynisyahannadu waxay u tixgelinayaan flavonoidgan inuu yahay wakiilka daaweynta ku habboon ee lagula tacaamulo cudurrada beerka, kuwaas oo ka dhasha culeyska sunta.
Qiyaasta budada Diosmetin
Qiyaasta diosmetin qiyaasta caadiga ah waa qiyaastii 1000mg maalintii. Si kastaba ha noqotee, qaddarku wuxuu noqon karaa ilaa 3000mg, iyadoo ku xiran xaalada aad rabto inaad daweyso. Daawada waxaa lagu qaataa laba cabir oo kala duwan ugu badnaan lix bilood.
Waa maxay Alaabada ay kujiraan Diosmetin?
Diosmetin waxay inta badan ku jirtaa miraha liinta oo ay ka mid yihiin oranjiga, mandarin, liin, miraha canab, iyo pummelos.
Si loo caddeeyo loona dejiyo qadarka ku jira badeecadan, saynisyahano ayaa adeegsada diosmetin UV spectrum.
Waxaa jira daraasado cilmi baaris ah oo aan tira lahayn oo cadeeyay qiimaha dawada dheef-shiid kiimikaad budo. Baarayaasha waxay tijaabisay flavonoid ku saabsan moodooyinka murugo si loo hubiyo doorkeeda dagaalka ka dhanka ah burooyinka kansarka. Daraasadaha oo dhan, diosmetin ayaa ku soo bandhigi lahayd astaamaha anti-kansarka naasaha, dhiigga, xiidanka, beerka, iyo kaansarka qanjirka 'prostate'.
Daraasadaha ayaa sidoo kale xaqiijinaya in flavone-kani uu ka difaacayo ischemia / dib-u-soo-kabashada dhaawaca kelyaha darteed. Intaa waxaa u dheer, waxay ka caawineysaa dib u habeynta hawada neefta.
In kasta oo ay jiraan tijaabooyin badan oo toos ah oo lagu taageerayo waxtarka diosmetin ee daaweynta kansarka iyo koritaanka lafaha, amnigeeda aadanaha ayaan wali la garanayn.
Tijaabooyinka baaritaanka iyo tirinta, baarayaasha ayaa adeegsada diosmetin d3.
Waddanka Mareykanka iyo qaar ka mid ah waddamada reer Yurub, diosmetin ayaa ganacsi ahaan laga heli karaa iyada oo ah cunto dheeri ah. Daawada waa warqad la'aan. Alaabtaani waxay sidoo kale ku jirtaa citrus bioflavonoids iyo qaabaynta.
Waad iibsan kartaa budada diosmetin ujeedooyin cilmi baaris ah.
1.Oak, C., Khalifa, OA, et al. (2018). Diosmetin ayaa Dhiirrigelisa unugyada Kansarka Dhirta ee Dhirta Kansarka Sanka iyada oo loo marayo Soo-qaadista Apoptosis iyo Qabashada Xayiraadda Unugyada. Joornaalka Caalamiga ah ee Oncology.
2.Patel, K., Gadewar, M., Tahilyani, V., iyo Patel, DK (2013). Dib-u-fiirinta Dhinacyada Daawada iyo Falanqaynta ee Diosmetin: Warbixinta Xasaasiga ah. Joornaalista Shiinaha ee Isdhaxgalka Daawada.
3.Ya-Ling Hsu iyo Po-Lin Kuo. (2008). Kaladuwanaanshaha Diosmetin Induces Kala-duwanaanshaha Osteoblastic Banii'aadnimada iyada oo loo marayo Kinsi Cuntada / C / 38 iyo Jumladda Kincelcelceliska ah ee loo yaqaan Kincel 1/2 Waddo. Journal of Lafaha iyo Cilmi-baarista Macdanta.
4.Androutsopoulos, VP, Mahale, S., Arrooo, RR, iyo Potter, G. (2009). Saamaynta Anticancer ee Flavonoid Diosmetin ee ku saabsan Horumarka Wareegga Hawada iyo Faafinta MDA-MB 468 Unugyada Kansarka Naasaha Sababta oo ah daweynta CPY1. Warbixinta Oncology.
Hagaha kama dambaysta ah ee Sesamol Antioxidant